Izindaba - Uxhumanisa kanjani i-clutch ne-throttle?
Ungabambisana kanjani ne-clutch ne-throttle?
Okokuqala, igiya kufanele libe sesimweni sokungathathi hlangothi. Ngemuva kokuqala imoto, cindezela i-clutch kuze kube sekugcineni, bese ufaka igiya endaweni yokuqala yegiya. Bese ukhulula ibhande. Lapho uxegisa i-clutch, yehlisa. Uma uzwa imoto inyakaza kancane futhi Ngemuva kokuqala ukuya phambili, yehlisa uphethiloli kancane, futhi ngasikhathi sinye, uqhubeke ukhiphe i-clutch ize ikhishwe ngokuphelele futhi imoto iqale ngokushelela. ukuguquka
Lapho sidinga ukugqoka igiya eliphezulu, sidinga ukufanisa ijubane legiye eliqondiwe, lapho-ke sidinga ukufaka impintsha ukwenza ijubane lifinyelele ijubane legiya lelitshe (ngokwesibonelo, lapho igiya likumagiya ama-5, ijubane kumele lifinyelele kumayadi angama-50 noma ngaphezulu). Uma sesikhuphukile, singanyathela i-clutch, sibeke igiya, bese sikhipha i-clutch (ijubane lingakhuphuka), futhi ngasikhathi sinye i-throttle igcina ukuze ijubane lisebangeni elizinzile.
Ungabambisana kanjani ne-clutch kanye ne-throttle lapho unciphisa futhi ushintsha?
Lapho udinga ukwehlisa ijubane, kufanele uqale wehlise ijubane. Siqala ukunyathela amabhuleki ukuze sinciphise ijubane, senze i-accelerator ngonyawo lwesokudla, siphakamise unyawo lwesokudla, sinyathele ngokushesha kwi-clutch, bese sigudlulela isigwedlo segiya egiyeni elihambisanayo. , Dedela i-clutch pedal, kanti ngenkathi ukhipha i-clutch pedal, nyathela kancane i-accelerator ngonyawo lwakho lwesokudla.
1. Isizathu se-flameout yokuqala ukuthi i-clutch iphakanyiswa ngokushesha okukhulu.
Lapho u-1 kuye ku-2 engenalutho, ngeke icime uma uyiphakamisa, futhi izoqala ukubamba ngemuva kuka-2 kuye ku-3, ngakho-ke kufanele uyiphakamise kancane uma ingu-2.
Lapho uphakamisela ku-2, khulisa kancane impintsha ngendlela yokwehlisa inani lezitebele, (ukufaka uphethiloli ngenkathi uphakamisa i-clutch) akunamthelela. Kuyisiqalo esijwayelekile.
2. Amandla egiya lesibili angakhuphuka emigwaqeni esezintabeni, futhi ijubane lingalawulwa nge-clutch ecindezela isigamu egiyeni lesibili. (Endabeni yesivinini se-U-turn esheshayo). Uma isivinini se-U-turn sishesha noma sihamba kancane, sebenzisa igiya eli-1 ukusilawula.
3. Ijubane lilungile nemoto ngeke ime. Ukwehla, cindezela i-clutch, futhi ukusheshisa, ukwandisa i-accelerator. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ukujika kulawulwa ngamagiya ama-2.